चार नेताले अपहरण गरे संविधानसभा: डा. अमरेशकुमार सिंह « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
चार नेताले अपहरण गरे संविधानसभा: डा. अमरेशकुमार सिंह
३ असार २०७२, बिहीबार ०१:११ मा प्रकाशित
नेपाली काङ्गे्रसका युवा नेता एवम् सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहले संविधानसभामा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्नुभएपछि चार नेताको प्रयास जस्ताको त्यस्तै सफल हुनेमा आशङ्का पैदा भएको छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिमा सिंहले दर्ता गराउनुभएको नौबुँदे असहमतिपत्रमा सङ्घीयता र प्रदेश संरचना, संसद् र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, नागरिकता, मधेसी आयोग र कार्यविधिमा आफ्नो विमतिका विषयहरू स्पष्ट गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा घटना र विचारले ‘तपाईं संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा गर्दै हुनुहुन्छ’ भनी ध्यानाकर्षण गर्दा डा. सिंहले भन्नुभयो, ‘मैले किन अड्चन पैदा गर्नु ? संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर सर्वाधिक क्रियाशील रहनेमध्ये म पनि एक हुँ । सङ्घीयता र समावेशीतासहितको संविधान नेपाली जनताको वर्षौंको चाहना हो । जनचाहनाविपरीत हुने कुनै पनि कदम मेरा लागि अस्वीकार्य छ । हिजो राजा जनइच्छाविपरीत चल्दा उनीसँग लडियो, अहिले छोटेराजाहरू जनताको आकाङ्क्षाभन्दा बाहिर जान्छन् भने यिनीहरूसँग पनि लडिन्छ र जितिन्छ । देशमा संविधान हुँदै नभएकाले हामीले लड्नुपरेको थिएन, वि.सं. २००४ सालदेखियता कुनै न कुनै रूपको संविधान यहाँ थियो, तर सबै जनतालाई समेट्ने प्रकारको थिएन । त्यसैले हामीले लड्नुपरेको थियो । अब पनि जनविरोधी संविधान बनाइन्छ या बनाउन खोजिन्छ भने लडिन्छ । यसो गर्दा अवरोध ठानिन्छ भने ठानियोस्, तर जनताविरुद्धको संविधान बनाउनचाहिँ दिइँदैन ।
० जनताको सुझाव लिएरै संविधान बनाउने भनिएको छ त, कसरी जनविरोधी भन्न मिल्छ ?
– हा…हा…हा…, इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक, पत्रपत्रिका, एफएम, टीभी र रेडियोहरूबाट जनतालाई आह्वान गरेर सुझाव माग्ने योजना बनेको बुझ्दै छु म । संविधानसभामा नागरिक संवाद समिति छ, दुई महिनाको समय जनतामा जान र सुझाव सङ्कलनका लागि नियमावलीमै राखिएको छ । जनसुझाव आएपछि प्रतिवेदन तयार गरेर फेरि सहमति समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । योबाहेक अरू कुनै पनि तरिकाले संविधान बन्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान या संविधानसभा नियमावलीमा गरिएको छैन । सर्वसम्मतिबाट बनेको नियमावली निलम्बन, संशोधन या परिमार्जन गर्न पनि सर्वसम्मति नै बन्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वसम्मतिले बनाएको नियमावलीविपरीत सभाध्यक्ष जान्छन् कि जाँदैनन् उनको पनि परीक्षाको घडी आएको छ । अन्तरिम संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अन्तरिम संविधानविपरीतको काम–कारबाही रोक्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य हुन्छ । संविधानको धारा १३८ को एक, दुई र तीन अनुरूप राष्ट्रपतिले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रपति चुक्नुहुँदैन ।
० तपाईं काङ्गे्रसको सभासद्–नेता, तर तपाईंका कुरा त काङ्गे्रसको भन्दा ठ्याम्मै विपरीत छन् त ?
– म काङ्गे्रसको भावनाविपरीत छैन र विपरीत हुन पनि सक्दिनँ । म पार्टी बलियो बनाउन चाहन्छु । देशमा काङ्गे्रस त्यसबेला मात्र बलियो प्रमाणित भएको छ, जतिबेला मधेस–तराईको मत काङ्गे्रसलाई मिलेको छ । अहिले काङ्गे्रसका केही नेतालाई दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मिलेर फसाएका हुन्, म त्यसबाट नेताहरूलाई बचाउन क्रियाशील भएको छु । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै सङ्घीयताविरोधी हो, एमाओवादी कस्तो पार्टी हो मैले भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । कम्युनिस्टहरूको कोपभाजनबाट पार्टीलाई जोगाउन म लागिपरेको हुँ, कम्युनिस्ट अङ्कुशलाई स्वीकार गर्नेहरूसँग मेरो विचार नमिल्न सक्छ, चाहे त्यस्ता व्यक्ति काङ्गे्रस पार्टीमै किन नहुन् ।
० सरकारको नेतृत्व बदल्न तपाईं सक्रिय भएको भन्ने पनि गलत नै हो त ?
– होइन, सरकारको नेतृत्व साह्रै अकर्मण्य भयो, यसले देशमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन र काङ्गे्रसप्रतिकै आस्था, विश्वास र भरोसा कायम गर्न पनि सरकारको नेतृत्व पूरै असफल भएको छ । त्यसैले काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने धारणा मैले बनाएको छु । सुशील कोइरालाज्यूले वास्तविकता बुझेर आफैँ पदत्याग गर्नु उपयुक्त हुन्छ, होइन भने व्यक्तिका लागि पार्टी र प्रजातन्त्र सती जान सक्दैन । पार्टी, प्रजातन्त्र र देशका लागि केही न केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
० कस्तो ठोस कदम ?
– जे गर्दा निकम्मा नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने हो ?
० तपाईं सरकार ढाल्न र चारदलीय सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन अनेकौँ किसिमले चलखेल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसो भए सत्य हो ?
– चलखेल–पलखेल म जान्दा पनि जान्दिनँ र गर्दिनँ पनि । म कसैका विरुद्ध क्रियाशील भएको छैन । नेपाली जनता, प्रजातन्त्र र नेपालको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दा को कहाँ ढल्छन्, को कसरी गल्छन्– सड्छन्, म त्यसको पर्वाह पनि गर्दिनँ । संविधानसभाको अस्मिता अपहरण भएको छ । चारजना नेताले संविधानसभाको अधिकार अपहरण गरेका छन् । त्यसका विरुद्ध मात्र म लागेको छु ।
० त्यसो भए राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भड्काउन तपाईं लाग्नुभएको भन्ने गलत हो ?
– राष्ट्रपति मैले भड्काउँदैमा भड्किनुहुन्छ भन्नेले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको ठान्छु म । मैले राष्ट्रपतिसँग भेट नपाएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग भेटेर गर्न केही कुरा पनि छैनन् । तर, राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको संरक्षकका हैसियतले संविधानको रक्षा गर्नुहुने विश्वास मैले लिएको छु ।
० तपार्इंका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद ‘बहादुर’ नेताहरूले संविधान बनाएर जारी गरिदिए भने के गर्नुहुन्छ ?
– त्यसबेला के गरिन्छ, अहिले नै सार्वजनिक रूपमा भन्न आवश्यक देख्दिनँ ।